Geedka loo beeray xilliga dayrta | December 2019
Ugu Weyn Ee Geedka loo beeray xilliga dayrta
Waxaan ku beernaa cherry macaan ee dayrta: talobixin wax ku ool ah
Beerta geed kasta beerta wuxuu leeyahay sifooyin gaar ah. Hadafkayagu waa inaan ku baraarujino shuruudaha aasaasiga ah ee lagu beerayo geed boodh ah xilliga deyrta. Ka dib dhan, waxaa muhiim ah ma aha oo kaliya inaad iibsato oo beerato geed beertaada, laakiin sidoo kale si aad u doorato goobta saxda ah iyo ciidda, si loo diyaariyo godkii iyo cherry si aad u beerto. Waxaan wadaagnaa talooyinka ugu muhiimsan ee ku saabsan doorashada dooranka iyo daryeelidda ka dib marka la beero.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Geedka loo beeray xilliga dayrta 2019